Ohere inweta ego nke Africa na njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo » Ohere inweta ego nke Africa na njem
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Minista Democratic Republic of Congo Elvis Mutiri wa Bashara, onye bụbu Minista na-ahụ maka Njem Nleta na Omenala wepụtara akwụkwọ njem ya "RDC: Ohere itinye ego na njem" na Fraịde 29 June na Kempinski Hotel Fleuve Congo na Kinshasa n'ihu Minista Jean-Lucien Bussa , Mịnịsta na-ahụ maka azụmaahịa mba ụwa na mmadụ ise sitere na "European Universities Editions" nke Germany.
Alain St.Ange, onye bụbu Mịnịsta njem, njem ụgbọelu, ọdụ ụgbọ mmiri na mmiri nke Seychelles nyefere adreesị ahụ na mwepụta nke akwụkwọ njem njem, nke onye ọrụ ibe ya na enyi Elvis Mutiri wa Bashara dere.
Alain St Ange si Seychelles na-enyefe adreesị ya
N'ikwu okwu site n'obi ya ma pụọ ​​na cuff dị ka a maara ya ugbu a, onye bụbu Minista Alain St.Ange weghachitere oge ahụ, ya na Minista Elvis Mutiri wa Bushara, ha rụrụ ọrụ maka njem maka mba ha dị iche iche na ịba ụba njem ndị njem na-abanye Africa. “Anyị abụọ ma na Africa nwere isi USP niile dị mkpa mana anyị makwaara na Africa chọrọ ọhụhụ ka ọ dịrị mkpa na ụwa nke njem. Mụ na ndị ọrụ ibe anyị ndị ọzọ raara onwe ha nye si kọntinent ahụ, anyị gbalịsiri ike, mana karịa, achọrọ ịme ọtụtụ ihe karị ”. kwuru Alain St.Ange. Ọ gara n'ihu kelee RDC maka ịhụ akwụkwọ nke Europe bipụtara nke gosipụtara ohere njem nleta ha na ime nke ahụ meghere ọnụ ụzọ maka Africa. Onye bụbu Minista St.Ange kwughachiri na njem bụ ụlọ ọrụ dị mkpa ka a nakweere ya, n'ihi na ọ nwere ike itinye ego na akpa nke onye ọ bụla n'Africa. Karịsịa mgbe emepụtara njem site na iji ọdịbendị, na itinye ndị mmadụ n’etiti mmepe obodo.
Mgbe ha rutere n’ala, Mohamed Taoufiq El Hajji na Cristina Marcu na-anọchite ndị bipụtara akwụkwọ a, weghachitere etu ha si soro onye bụbu Minista Elvis Mutiri wa Bashara rụkọọ ọrụ, yana etu akwụkwọ a ga-esi bụrụ njikọ siri ike na mbido mba ahụ, uto akụ na ụba ya RDC's evolution and intercultural evolution, tupu o nye onye bụbu Minista na onye dere akwụkwọ a akwụkwọ asambodo dị ka onye ode akwụkwọ.
Elvis Mutiri wa Bashara na-anata diplọma ya n'aka Cristina Marcu na
ndị otu ndị nkwusa Lambert Muller, Mohamed Taoufiq El Hajji,
Elvis Mutiri wa Bashara, Benoit Novel, Cristina Marcu na Jian Aurora
Ọ bụ Prọfesọ Nyabirungu Mwana Songa nke RDC bụ onye nwere nsọpụrụ nke iwetara ndị Minista, ndị nnọchi anya mba ọzọ, ndị omeiwu, ndị nnọchi anya a họpụtara ahọpụta na ndị njem mpaghara akwụkwọ ọhụrụ ahụ. Ọ weghachitere ọrụ ọkachamara na ọrụ Elvis Muturi wa Bashara wee wepụta usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya na nke ọrụ ya gụnyere oge ọ nọ na mba ọzọ nke ọ na-aga n'ihu na ọmụmụ ihe ya na-alọghachi mgbe ọtụtụ afọ gbasiri ike na mbụ. Ọ nyochara akwụkwọ ahụ na-ehota isi ihe ndị metụtara yana igosipụta njem nlegharị anya nke RDC nke ekpuchiri.
Elvis Muturi wa Bashara kwuru mgbe ọ gara n’elu ikpo okwu obi a happyụrị ya nwere na ndị enyi ya kwụ ya n’akụkụ mgbe ọ nọ n’ọfịs dị ka Mịnịsta na kwa mgbe ọ na-arụ ọrụ ikpokọta ozi achọrọ maka akwụkwọ n’onwe ya. Ndị niile bịara ya nwere ekele maka okwu ekele ya.